Nintendo Controller mifehy miasa amin'ny PC sy Android mora foana | Vaovao momba ny gadget
Nintendo Controller mifehy miasa amin'ny PC sy Android mora foana
Iray amin'ireo tombony lehibe azo ampiasain'ny konsolan'ny taranaka farany indrindra ny tsy fisian'ny tariby amin'ny fifehezany, izay tsy vitan'ny manokatra varavarana be amin'ny fampifanarahana ireo fitaovan'ny antoko fahatelo, fa manokatra ny zava-dehibe indrindra koa, hanomezana ny fifehezana ny console anay ny fampiasana izay tadiavinay sy ny lampihazo tadiavinay. Ny iray amin'ireo fanontaniana lehibe, nomena ny safidin'i Nintendo amin'ny "fanakanana" ny rafitr'izy ireo, dia ny hoe mifanaraka amin'ny rafitra fiasa novolavolain'ny orinasa hafa ny Joy-Con. Androany izahay dia manaisotra anao amin'ny fisalasalana, ny Joy-Con dia mifanaraka tanteraka amin'ny Windows sy macOS ary koa amin'ny Android.
Ny fanamafisana fa ny Joy-Con dia mifanaraka amin'ny rafitra hafa dia tonga haingana tamin'ny tambajotra. Raha ny marina, ny fampitahana voalohany sy miharihary indrindra dia natao tao amin'ny Windows 10 PC, izay ahitàna ny Joy-Con amin'ny alàlan'ny fifandraisana Bluetooth toy ny hoe misy mpanara-maso. Amin'ny lalao sasany dia niasa tsy nisy fahasarotana bebe kokoa, na izany aza, tamin'ny lalao hafa dia nanapa-kevitra ny hampiasa rindrambaiko izy ireo miandraikitra ny fanendrena fiasa sasany ny bokotra ka ny baiko marina dia tanterahina nefa tsy mamorona karazana lesoka.
Mora kokoa raha mifanaraka macOS, izay ahitan'ny rafitra miasa ny mpanara-maso ny Nintendo Switch ho mpanara-maso Bluetooth hafa, manatratra, mampifandray ary manatanteraka. Toy izany koa no mitranga amin'ny Android, tsy maintsy ataontsika tsiroaroa ilay Joy-Con amin'ny fitaovantsika hahafahantsika mankafy mpanara-maso kely sy azo fehezina ahafahana miala voly. Hetsika iray liana amin'ny fahalianana, amin'ity fomba ity dia afaka milalao lalao video amin'ny fitaovantsika Android isika rehefa lany ny Nintendo Switch amin'ny bateria tena mahantra eo am-pilalaovana ilay dika azo entina. Teboka iray manohana ny N lehibe hampifanaraka tanteraka ny fifehezana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Nintendo Controller mifehy miasa amin'ny PC sy Android mora foana
Ahoana ny fanontana amin'ny iPhone sy iPad tsy misy olana
Ny firaketana ny fivarotana Nintendo Switch dia mamaky firaketana araka ny Nintendo ihany